the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part3- Khit Minnyo
_Hacking With Android
_Computer Basic Free Class
Home / Kali / the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part 3
the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part 3
KhitMinnyo December 09, 2020 Kali
1.3. Kali ကို ဘယ်သူတွေ သုံးသင့်လဲ
ဒီအကြောင်းကိုတော့ ကျွန်တော့် အယူအဆကိုသာ ဦးစားပေး ရေးသွားပါမယ်။ Kali ရဲ့ ဖော်ပြချက်ကိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီစာအုပ်အကြောင်း မိတ်ဆက်မှာကတည်းက ပြောခဲ့ပြီးပြီမို့ပါ။ မိတ်ဆက် မဖတ်ခဲ့ရသေးရင် 👉👉👉👉👉👉👉 ဒီကနေ 👈👈👈👈👈👈👈 ဖတ်ပါ
Kali ကို ဘယ်လိုလူတွေ သုံးသင့်လဲ လို့ ကျွန်တော့်ကို မေးလာတဲ့အခါတိုင်း 'သုံးချင်တဲ့သူ သုံးသင့်တယ်' လို့ ပြန်ဖြေမိပါတယ်။ အချို့က တမင် ခွတိုက်ဖြေတယ် ထင်ကြပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပိုဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ မြင်လို့ပါ။ Kali မှာ Hacking လေ့လာဖို့အတွက် tool တွေ ပါတယ် ဆိုတာ သင့်တော်တဲ့ အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး။ Parrot မှာလည်း ပါတာပါပဲ။ Ubuntu မှာလည်း အဲ tool တွေ တင်သုံးလို့ ရတာပဲ။ ပြီးတော့ Windows မှာတောင်မှ PenTest Box လို tool box တွေ တင်သုံးပြီး Hacking လေ့လာလို့ ရသေးတာပဲ။ ဒါကြောင့် Hacking လေ့လာချင်မှ Kali သုံးပါ ဆိုတဲ့အဖြေလည်း ကောင်းမွန်လျော်ကန်တဲ့ အဖြေမဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က Kali သည် အခြား Linux တွေထက်တောင် ပိုလုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရနိုင်တဲ့ ခံစားမှုပါ။ ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်။ ဒီအပိုင်းက ကျွန်တော့်စိတ်ထဲရှိတာကို ပြောတာလို့။ ခံစားမှုပေါ်မူတည်တာ ဖြစ်လို့ မှန်ချင်လည်းမှန်မယ်။ ကြိုက်မှ မှတ်ပေ့ါ။ ရှေ့က မိတ်ဆက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ Kali မှာ upstream Kernel ကို သုံးထားတယ်။ ပြီးတော့ Package တွေတိုင်းကို စိတ်ချရတဲ့ Developer တွေက သေချာစစ်ဆေးထားတယ်။ အမြဲတမ်းပဲ update ဖြစ်နေတယ်။ ဒီအချက်တွေအရ လုံခြုံမှုပိုင်းမှာ ပိုပြီး စိတ်ချရတယ်လို့ ခံစားလို့ရတယ်။ အားနည်းချက်တွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ထားပါ။ တစ်ခုပဲ ပြောရရင် Kali ကို သုံးချင်သူတိုင်း Kali သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဒီလိုပြောတော့ မေးစရာရှိလာနိုင်တယ်။ ဒါဆို လူတိုင်း သုံးသင့်လား ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဒီမေးခွန်း မေးရင်တော No ပါ လို့ပဲ ဖြေရမှာပါပဲ။ မသုံးသင့်တဲ့လူစာရင်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေ မသုံးသင့်ဘူးလဲဆိုတော့ ...
Linux ဆိုပြီးရော ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုတဲ့သူ
Linux ဆိုတာကို ကြားဖူးပြီး သူများသုံးလို့ လိုက်သုံးချင်တဲ့သူ
ဂိမ်းမဆော့ရရင် အဆင်မပြေဘူး ဆိုတဲ့သူ
Developing အတွက်ပဲ Linux သုံးချင်သူ
အခက်အခဲကြုံမှာ ကြောက်သူ နဲ့ ကြုံလာရင် ဇွဲမရှိတဲ့သူ
Microsoft Office ရမှ အဆင်ပြေတယ်။ ကျန်တာတွေ အဆင်မပြေဘူး ဆိုတဲ့သူ
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ မရှိတဲ့သူ (သူများကွန်ပျူတာ ငှားသုံးရသူ သို့မဟုတ် ရုံးက ထုတ်ပေးထားတဲ့ ကွန်ပျူတာပဲ ရှိသူ)
အင်တာနက် အဆင်မပြေတဲ့ နေရာမှာ နေနေရသူ
ပျက်မှာ မှားမှာ ကြောက်တတ်သူ
အထက်ပါ အချက်တွေထဲ ပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Kali သုံးချင်ရင်တောင်မှ VirtualBox မှာသာ သုံးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အဲထဲမပါဘူး ဆိုတဲ့သူတွေက Kali သုံးချင်ရင် သုံးပါလို့ ပဲ တိုက်တွန်းပါမယ်။
1.4. Newbie များအတွက် Kali အကျဥ်းချုပ်
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ အဓိကကျတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုက Operating System ပါ။ ဒါမပါဘဲနဲ့ ကွန်ပျူတာ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ချင်တာတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Application တွေကို အသုံးချတာတွေသည် Operating System ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ Operating System ကို အတိုကောက် OS လို့ သုံးပါမယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ Fb Group တွေထဲက Online Shopping မဟုတ်ဘူးနော် 😔။ OS ဆိုတာ Operating System လို့ မှတ်ထားရအောင်။
OS တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲထဲကမှ အားလုံးနီးပါ သိကြတဲ့ OS တွေကို ပြောရရင် Windows, Android, Mac OS, iOS, Chrome OS, ... ပေါ့။ ကွန်ပျူတာ မရှိတဲ့သူတွေလည်း ရင်းနှီးတာကတော့ Android ပေါ့။ Android ဆိုတာမြင်ရင် ကျွန်တော်တို့ အများစုက Phone တစ်မျိုးကို ပြေးမြင်လိုက်ကြတော့တာပါပဲ။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်သလိုလိုရှိပေမယ့် မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဖုန်းက ဖုန်းပါ။ အဲသည်ဖုန်းကိုမှ ခုနပြောတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ OS တစ်ခုခု တင်လိုက်တယ်။ iOS တင်တော့ iPhone တွေ ဖြစ်လာသလို၊ Android OS တင်လိုက်တဲ့ဖုန်းတွေက Android Phone တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် Android ဆိုတာ ဖုန်းမဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ Android ဆိုတာသည် Android Phone တွေအတွက် Operating System တစ်ခုဆိုတာ ကွဲမြင်တတ်ရင် ကျေနပ်ပါပြီ။
ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ လူတိုင်းနီးပါးသည် Android or iOS တစ်ခုခုနဲ့တော့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေမှာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဖုန်းဆိုင်ကနေ Android ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်လာပြီးတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ Software တွေကို ရယူနိုင်ဖို့အတွက် PlayStore or other store တစ်ခုခုကနေ Faebook, Messenger, Viber, ... စတဲ့ Application တွေကို ရယူ install လုပ်ကြရပါတယ်။ အချို့သော Application တွေကတော့ Store မှာ မရှိပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ Official site တစ်ခုခုကနေ ဒေါင်းယူပြီးမှ install လုပ်ရပါတယ်။ Kali မှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
Android မှာ သူ့အတွက် Application တွေကို ထားထားပေးတဲ့ PlayStore (Software Center) ကနေ install လုပ်နိုင်သလိုပဲ၊ Kali မှာလည်းပဲ Application တွေကို သူ့ရဲ့ source (Software Center) ကနေ ရယူပြီး install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ရာမှာ apt command ကို သုံးရတာပဲ ကွာပါတယ်။ ဒါ့ပြင် 18+ game apk တွေကို လိုချင်တဲ့အခါမျိုး၊ YourFreedom လို apk မျိုး လိုချင်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့ PlayStore မှာ ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲသည်အခါ ရနိုင်တဲ့ site တွေကနေ သွားဒေါင်းရတော့တာပါပဲ။ Kali မှာလည်း ထို့အတူပါပဲ။ Source မှာ မရှိတဲ့ application တွေကို သုံးချင်တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ application ရဲ့ တရားဝင်နေရာမှာ သွားဒေါင်းပြီး install လုပ်ရတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ OS တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ အခြေခံသဘောသဘာဝတွေက တူညီကြပါတယ်။ သိပ်ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ နည်းသိဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ ☺️☺️☺️။
သင့်အနေနဲ့ ဒီနေရာဖတ်နေတဲ့အထိ Kali မတင်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ နောက်တစ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ Kali တင်ထားပြီးသားဖြစ်မှ ဖတ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ မဟုတ်ရင် လက်တွေ့မပါတဲ့အခါ မေ့သွားနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခန်း ၁ ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ အခန်း ၂ မှာ Kali ကို လက်တွေ့လေ့လာကြပါစို့။
Hacking လေ့လာလိုသူတွေအတွက် Online Class တွင် လေ့လာလိုပါက
All in One Hacking Training's Facebook Page မှဖြစ်စေ ...
Viber +959976413560 မှ ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Kali စာအုပ်၏ Main Menu သို့ ပြန်သွားရန် ==>> Kali စာအုပ်၏ Main Menu သို့ ပြန်သွားရန် Kali စာအုပ်၏ Main Menu သို့ ပြန်သွားရန်
the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part3Reviewed by KhitMinnyo on December 09, 2020 Rating: 5
Unknown December 9, 2020 at 5:48 PM
Unknown April 30, 2021 at 7:32 AM
Anonymous February 2, 2022 at 10:04 PM
Bet365 Casino | Play With the Best Casino Bonus Code
Bet365 is one of the most trusted 바카라 사이트 brands in the world with plenty of expertise and experience to keep the site spinning, rewarding and providing the
Facebook hack နည်း ၅ မျိုးနှင့် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ၊ တကယ်ရော Facebook Hack တာဖြစ်ပါသလားဆိုတာ
Facebook ပေါ် က Hacking အယူအဆများ နှင့် Facebook hack နည်းများ အကြောင်း
Android ဖြင့် Hacking လေ့လာလိုသူတွေအတွက် root မလိုဘဲ linux သုံးရအောင်
Hacking ေလ့လာေနျပီး စာအုပ္ဝယ္ယူဖို႔ ခက္သူေတြအတြက္ Free Version
Android မှာ Metasploit တင်ပြီး Hacking လေ့လာရအောင် (no root)
Android မှာ PC လို Kali တင်မယ် ( root ရှိရှိ မရှိရှိ ရပါသည်)
Shared by : Khit Minnyo